လွယ်ကူသော, သင့်ရဲ့အပြုံးအလှဆင်ရန်တန်ဖိုးနည်းနည်းလမ်းများ | သွားလမ်းညွှန် Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်
ဖြူပြုံးရမယ့်ဘေးကင်းလုံခြုံလမ်းရှိပါသလား? အားလုံးကတော့ကိုအကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်၏. ဤဆောင်းပါးတွင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူအချို့သောမြတ်သောအံသွားပေးသွားမှာပါ.
ဖြူမှပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း, တောက်ပသောအံသွားအကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သန့်ရှင်းရေး. သွားဘက်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်းတဲ့ဟာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သင့်ပါတယ်, သငျသညျတိုင်းခြောက်လအသီးအသီးကိုခန့်အပ်အချိန်စာရင်းဘယ်မှာ. သို့သော်, ပုံမှန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သန့်ရှင်းရေးလျစ်လျူရှုဖို့လွယ်ကူသော်လည်းအများအားဖြင့်ပါးစပ်တွင်းအာမခံအများစုအမျိုးအစားများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်.
အကြံပြုချက်! သင်သည်သင်၏အံသွား Whiten ပြီးနောက်, သငျသညျမသောက်အရာကိုသတိထားသို့မဟုတ်အစာကိုစား. သူတို့ကအရောင်ပြောင်းစေနိုငျသောပိုမိုလွယ်ကူစွာအစွန်းအထင်းများနှင့်အရောင်အဆင်းကိုစုပ်ယူပါလိမ့်မယ်.
လေဆာ Whiten အမြန်ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုအထိရောက်ဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကိုသူတို့ဖွစျနိုငျအဖြစ်ကိုသင့်အံသွား၎င်းတို့၏ကနဦးအဖြူပြန်ပြန်ပြောင်းရှိခြင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်. တစ်ဦးကအရောင်ချွတ်ဖြေရှင်းနည်းသင့်ရဲ့အံသွားပေါ် brushed ဖြစ်ပါတယ်, ထို့နောက်လေဆာရောင်ခြည်ကိုသက်ဝင်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါအံသွားကအနည်းဆုံးငါးကြိမ်ခြောက်အရိပ်အားဖြင့်ချက်ချင်းဖြစ်ပါသည်.
သင့်ရဲ့အစားအစာအတွက်ကုန်ကြမ်းအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထည့်သွင်းရန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အားကြီးသောကျန်းမာသင့်ရဲ့အံသွားကိုစောင့်ရှောက်ကူညီရန်. ဖက်တီးအစားအစာများကိုအခေါင်းပေါက်၏အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်နှင့်သင့်အံသွားအရောင်ပြောင်းစေနိုင်ပါတယ်. သူတို့သည်သင်၏အံသွား၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ကြောင့်အစားအစာများကိုဤမျိုးရှောင်ကြဉ်ပါ. ကျန်းမာသောအပြုံးများအတွက်ရည်ရွယ်သောအခါသင်တို့သည်လည်း snacking အဆက်မပြတ်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်.
အကြံပြုချက်! သငျသညျအဖြူအံသွားရှာနေလျှင်အံသွား-အစွန်းအထင်းအဖျော်ယမကာကိုရှောင်ပါ. အချိုရည်ဤအမြိုးအစား Coke ပါဝင်, ကော်ဖီနှင့်အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်.
သငျသညျအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်မသောက်ရသောအခါ whitened တစ်ဦးအံသွားရှိခြင်းပြီးနောက်အလွန်သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. Whiten အံသွားကိုအလွယ်တကူအစားအစာနှင့်သောက်မှအမျိုးမျိုးသောအရောင်အဆင်းသို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းကိုစုပ်ယူပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏အံသွား whitened ခဲ့ကြဖူးပြီးနောက်ကွာမှောင်မိုက်သို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းအစားအစာများနှင့်အဖျော်ယမကာနေ. ကော်ဖီသွားသို့စိမ်ပြီးအရောင်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
သင့်ရဲ့အံသွားအဖြူနှင့်တောက်ပနေရစ်ကိုကူညီတဲ့ကောက်ရိုးတဆင့်သောက်သုံးကြိုးစားပါ. တစ်ဦးကောက်ရိုးကိုသုံးပြီးသင်စားသုံးယင်းအဖျော်ယမကာသင့်ရဲ့အံသွားကိုရှုတ်ချမည်အကြောင်းကြောင့်လျော့နည်းဖွယ်ရှိစေသည်. အဆိုပါအရည်ကိုသင့်အံသွားကိုရှောင်ကွင်းနှင့်သင့်လည်ချောင်းကိုဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်.
အကြံပြုချက်! တစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ် Whiten စျေးကြီးဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သင့်ရဲ့အံသွား whitening စတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းင်. ဒီနည်းလမ်းကိုပိုပြီးငွေကုန်ကြေးဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်အခြားနည်းလမ်းများထက်ပိုကောင်းတဲ့နဲ့ပိုမြန် Whiten အတှေ့အကွုံကိုထောက်ပံ့ပေး.
အံသွား Whiten ဖို့ strips နေရာတိုင်းအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်လည်းမျှမျှတတစျေးသိပ်မကြီးတဲ့များမှာ. ဤရွေ့ကား strips တွေသင့်ရဲ့အံသွားကနေမျက်နှာပြင်ကအစွန်းအထင်းသန့်ရှင်းရေးအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး Whiten them.Whitening strips တွေနဲ့ကုသနေသောဓာတုပစ္စည်းမကြာသေးမီကကျော်ကြားမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြ, သူတို့ကအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုမပေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
သင်သည်သင်၏အံသွား whitened ရသည့်အခါတိုင်းဒါကြောင့်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, တိုင်းအစာစားပြီးနောက်သင်သည်သင်၏အံသွားတိုက်ရမယ်. ကျန်ရှိတဲ့အစာအမှုန်သင့်ရဲ့အံသွားရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘက်တီးရီးယားကြီးထွားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်. သင်သည်သင်၏အံသွားတက်ပြန်ခိုင်မာစေဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးဆိုရင်, ဘက်တီးရီးယားပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေ, ဒါကြောင့်သေချာအောင်သင်တိုက်ပါစေ.
အကြံပြုချက်! သငျသညျချက်ချင်းပဲအဖြူရောင်အပြုံး၏လိုအပ်ချက်အတွက်တဲ့အခါ, သငျသညျချက်ချင်းပဲသင့်ရဲ့သွားဆရာသွားရောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးလည်းဖြူပြုံးရယူဖို့ကြိုးစားတိုင်း, သငျသညျထိခိုက်မှုဖြစ်စေတဲ့အစားအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုအောင်၏အန္တရာယ်ကို run.
သငျသညျကုသ whitening ဆို sensitivity ကိုအာရုံစိုက်သင့်တယ်. ဒါဟာအတော်လေးနာကျင်စေနိုင်ပါတယ်နှင့်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်စေခြင်းငှါပေမယ်ဆဲနှိပ်စက်တာ. ဒီဖြစ်ပေါ်နေလျှင်, သင် Whiten ထုတ်ကုန်၏အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်ရှေ့တော်၌သင်တစ်ဦးသွားဆရာဝန်မြင်သေချာအောင်. သူကသင့်ရဲ့အံသွားဖို့သင်ဤထိခိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား option ကိုအကြောင်းသိစေခြင်းငှါ.
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်သွား Whiten အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြပါဘူး. သငျသညျလှပသောအဖြူအံသွားချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင်တစ်ဦး Whiten ကုသမှုအပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့အခါ, ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံတစ်ဦးစွန့်ပစ်သည်. သင်ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့အားလုံးကိုကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်.
အကြံပြုချက်! whitening အံသွားစတင်ခင်မှာ, သင့်ရဲ့သွားဆရာနှင့်စကားပြောဆို. သငျသညျသငျသညျအနာဂတျတှငျပွုမိအဓိကပါးစပ်တွင်းအလုပ်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုသိလျှင်, အလုပျပွီးစီးခဲ့သည့်တိုင်အောင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း whitening သင့်ရဲ့အံသွားနှောင့်နှေး.
သငျသညျသကြားလုံးသို့မဟုတ်အခြားသကြားလုံးစားတဲ့အခါမှာအဘို့အပယ် stowed တစ်ခုတည်းအသုံးပြုခြင်းကိုသွားပွတ်တံ Keep. ဤရွေ့ကားအစားအစာများကိုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့အံသွားကပ်စေခြင်းငှါ, သူတို့နှင့်မထိခိုက်စေစတငျနိုငျ. သငျသညျမွှေးခံစားခဲ့ကြပြီးနောက်, သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်တဲ့အခိုက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုယူ. သငျသညျနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သင့်ရဲ့အံသွားပွတ်တိုက်နှင့်ကောင်းစွာသူတို့ကိုသုတ်လျှင်သွားတိုက်ဆေးမလိုအပ်.
သွားတိုက်ဆေး whitening တစ်ဦးအံသွားနှင့်အတူတိုက်. ဤသူတို့သည်သွားတိုက်ဆေးအခြား Whiten အဖြစ်တစ်လက်မဟုတ်ပေမယ့်, သူတို့ဆိုမကြာသေးမီအစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားနှင့်အသစ်အစွန်းအထင်းမှသင်၏အံသွားကာကွယ်လိမ့်မည်. ဤရွေ့ကားသွားတိုက်ဆေးကြွေမထိခိုက်စေဘဲအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟု silica နှင့်ဖန်ဆင်းတဲ့အပျော့စားပွန်းစားခြင်းမဆံ့.
အကြံပြုချက်! တိုက်မှအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သွားဖုံးနှိပ်နယ်, အနည်းဆုံးတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် FLOSS. သင်တစ်ဦးသည်ဘောဇဉ်သို့မဟုတ်ရေစာရှိတိုင်းအချိန်တိုက်ခြင်းနှင့် FLOSS လျှင်သင်၏သွားအများကြီးလည်းဖြူကျန်ရှိခဲ့လိမ့်မည်.
သငျသညျမသောက်သို့မဟုတ်အရက်သောက်ပြီးနောက်သင်၏နှုတ်ဆေး. အဘယ်အရာကိုမျှအစားအစာသို့မဟုတ်သောက်စရာစားသုံးပြီးနောက်သူတို့ကိုရှင်းလင်းဖို့အချိန်ကိုရှိပါတယ်လျှင်သင်၏သွားလည်းဖြူနေမည်. ဒီအစွန်းအထင်းများနှင့်အခေါင်းပေါက်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
ခြံ whitening အံသွားကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. သို့သော်, သူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းသတိထားရမည့်အရေးကြီးသောရဲ့, သူတို့အရောင်ချွတ်အရောင်တင်နဲ့တူအလုပ်လုပ်သောကွောငျ့. ဒီနည်းလမ်းကိုအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုရရ, သငျသညျစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကလျှောက်ထားကြောင့် overdoing ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုအပ်.
အကြံပြုချက်! တချို့က whitening သွားတိုက်ဆေးသူတို့ပြောကြသည်အားလုံးမဟုတ်. သူတို့ကသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ကူညီစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးအခြားမဟာဗျူဟာများနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုကြသည်.
ဘာမှဝယ်ရှေ့၌သင်တို့အံသွား Whiten ဖို့ကျန်းမာရေးနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့သွားဆရာစကားပြော. သင့်ရဲ့သွားဆရာသင့်အခြေအနေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်းသင့်သတိပေးနိုင်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့ regimin သို့မဝင် Build. နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာမဝင် plaque ၏သင်၏နှုတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီပေးသည်, အံသွားအရောင်ပြောင်း၏အကြောင်းတရားများထဲကတစ်ခုသောဖြစ်ပါသည်.
မကြာခဏရေသောက်လည်းဖြူအံသွားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်. ရေနှင့်အတူလက်မဆေးကြောင့် appearing.Make မှသင်၏အစားအစာနှင့်အစားအစာကာလအတွင်းရေသောက်နေတဲ့အလေ့အကျင့်အစွန်းအထင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့ကောင်းတစ်ဦးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
စပျစ်ရည်နှင့်ဆိုဒါအဖြူအံသွားအဘို့သင့်ရှာပုံတော်၌သင်တို့၏ရန်သူများမှာ. ဤရွေ့ကားအချိုရည်သင့်ရဲ့အံသွားကိုရှုတ်ချသို့မဟုတ်အရောင်ပြောင်းနိုင်. ကျန်းမာသန်စွမ်းအချိုရည်နှင့်အတူသူတို့ကိုအစားထိုးပါ. သငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဤအဖျော်ယမကာမသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်, ခြောသင်အစွန်းအထင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့ပါးစေရန်ရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့အံသွားတိုက်ပါစေ.
အကြံပြုချက်! ထို walnut သစ်ပင်တပင်၏အခေါက်ညင်ညင်သာသာသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်အစွန်းအထင်းရှားပွတ်တိုက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. ပုံမှန်ပေါ်မှာဤအခေါက်အသုံးပြုခြင်းသည်ဤအစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လေ့ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုမှသို့မဟုတ်တိကျတဲ့အဖျော်ယမကာသောက်သုံးမှမြင်အဝါရောင်အရောင်ပြောင်းနိုင်.
တစ်ဦး fibrous ကိုက်ညီမှုနှင့်အတူသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သဘာဝကျကျသင့်ရဲ့အံသွားပွတ်တိုက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုတချို့ကအစားအသောက်များပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းများမှာ, သခွားသီး, မုန်လာဥနီ, နှင့်မုန်လာဥနီ. ပိုပြီးဧရိယာဖုံးလွှမ်းရသင်၏နှုတ်၌ရှိ၏စားနပ်ရိက္ခာ swish ဖို့ကြိုးစားပါ.
သင့်ရဲ့အစားအစာသို့ပိုပြီးနို့ထွက်ပစ္စည်းများထိုးသွင်း. အားကြီးသော, ကျန်းမာသောအံသွားဒိန်ချဉ်နဲ့တူအစားအစာများအတွက်အာဟာရမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်, နို့နှင့်ဒိန်ခဲ. ဤရွေ့ကားသတ္တုဓာတ်လည်းသင့်ရဲ့အံသွားအတွက်ကြွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, သောအစားအစာများနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အရောင်ပြောင်းစေသောအခြားအမှုအရာရန်သင့်အံသွားလျော့နည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်စေသည်. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အစားအစာအတွက်ဤကဲ့သို့သောအပါအဝင်အစားအစာများကိုသငျသညျလည်းဖြူသောအပြုံးတိုကိုကူညီမည်ဟုဆိုလိုသည်.
အကြံပြုချက်! ဖြူအံသွားရယူဘို့မူလစာမျက်နှာကုစားတစ်ဦးကဆင်းဘက်ခြမ်းရှိလေ့ရှိပါတယ်–သူတို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်အထိခိုက်မခံဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, သွေးထွက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းရောင်ရမ်းသွားဖုံး. သင်တို့သည်ဤပါးစပ်တွင်းပြဿနာများကိုမဆိုတွေ့ကြုံခံစားလျှင်သင့်သွားဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့.
သငျသညျအစာစားပြီးနောက်ဘက်တီးရီးယားသင်၏နှုတ်ပတ်ပတ်လည်ကြီးထွားလာမည်. သင်သည်သင်၏အံသွားတက်ပြန်ခိုင်မာစေဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးဆိုရင်, ဘက်တီးရီးယားပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတိုက်ဖို့သတိရပါ.
သင့်ရဲ့အဖြူအံသွားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မှောင်မိုက်အဖျော်ယမကာနှင့်အသီးအပွရှောင်ကြဉ်ပါ. အခြို့သောအချိုရည်, ထိုကဲ့သို့သောအနီရောင်စပျစ်ရည်နှင့်ကော်ဖီအဖြစ်, သင့်ရဲ့အံသွားပေါ်အစွန်းအထင်းထွက်ခွာနိုင်. သငျသညျရိုးရိုးကဤအချိုရည်တက်မပေးနိုင်လျှင်, ထိုအစွန်းအထင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျော်လွှားဖို့ကောက်ရိုးတဆင့် SIP.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ရန်သင့်အားရိုးရိုးပါအောက်ဆိုဒ်ငါးပိနှင့်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါသူတို့နှင့်အတူတိုက်နိုင်. ဤအရာ၏နှစ်ဦးစလုံးအရှိဆုံးစီးပွားဖြစ် whitening သွားတိုက်ဆေးအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြ၏, သို့သော်လည်းသူတို့သည်အိမ်မှာသင့်ရဲ့စားစရာခန်းတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်.
ဤရွေ့ကားတ္ထုများကိုသင့်အံသွားအတွက်နက်ရှိုင်းသောအစွန်းအထင်းဖြစ်စေနိုင်သည်. သငျသညျကော်ဖီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်မသောက်ရကြမည်ဆိုပါက, သင်သည်ထိုသူတို့သောက်နေတဲ့ကောက်ရိုးကိုသုံးနိုင်သည်, သင့်ရဲ့ခွက်ကိုပြီးသွားပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်, သင့်ရဲ့သောက်လက်စသတ်သည်ချက်ချင်းပြီးနောက်သို့မဟုတ်ဖြီးအံသွား. လက်ဖက်ရည်နဲ့ကော်ဖီသောက်သုံး, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အတူ, လူရဲ့အံသွား discoloring ဖို့အဓိကမျှဝေသူများမှာ.
သင့်ရဲ့အံသွား Whiten မှသဘာဝဆေးတစ်လက်ကိုသုံးပါ, ပန်းသီး cider ရှလကာရည်နဲ့တူ. ဒီအစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သူမြားကိုပစပ်ထဲမှာဘက်တီးရီးယားဖယ်ရှားပစ်ပြခဲ့. ကုသမှုနှင့်အတူထိရောက်သောဖြစ်, ပုံးရည်နှင့်အတူနေ့စဉ် gargle, နံနက်ယံ၌ပိုကောင်းပါတယ်, ထို့နောက်အံသွားဖြီးနှင့်အတူကနောက်ဆက်တွဲ.
အကြံပြုချက်! လက်ျာတံတစ်ချောင်းကိုရွေးချယ်ပါ. သငျသညျကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်အဘယျသို့သွားပွတ်တံပေါ်မှာသူသို့မဟုတ်သူမ၏အကွံဉာဏျရရန်သင့်သွားဆရာဝန်နှင့်အတူဆင့်ဆိုရမည်.
သငျသညျအပြင်မှာအစားသူတို့ကိုဝယ်ရှာတွေ့နိုင်မည်အကြောင်းကြောင်းသဘာဝကအံသွား Whiten ရှိပါတယ်, ဤသို့သင်ပိုက်ဆံချွေတာ. ထို walnut သစ်ပင်တပင်၏အခေါက်အံသွား Whiten ဖို့အသုံးပြုအကောင်းဆုံးကုသမှုဖြစ်ပါသည်. အပင်တစ်ပင်မှအခေါက်ကိုရယူပါ, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကသုတ်ခြင်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့အံသွားပွတ်သပ်. ဒီအစွန်းအထင်းများနှင့် plaque ဖယ်ရှားပစ်ရန်အလုပ်ဖြစ်တယ်.
သင်သည်မည်သည့် Whiten ဖြေရှင်းနည်းကိုသာ Whiten သဘာဝကအံသွားသိသင့်. သငျသညျ veneers အပိုင် အကယ်., သရဖူတူ, ဖြည့်, veneers ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ရှေ့အံသွားပေါ်ပါးစပ်တွင်းအလုပ်၏အခြားအမျိုးအစားများ, သူတို့ကအရောင်တူနေမည်. သဘာဝကအံသွား whitening သိသိသာသာထွက်ကပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသွားဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်ဖြစ်ပေါ်စေ.
သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့ရှေးခယျြရာတှငျရှေ့၌သင်တို့မေးရိုးသို့မဟုတ်သွားဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်. သင်သည်မည်သည့်အခြားကိစ္စများလုပ်ဖို့ရှိပါကသင့်ရဲ့အံသွား whitening မစတင်ပါနဲ့.
တစ်ဦးကဆေးလိပ်သောက်သွားပေါ်သောကွောငျ့သူတို့အားအဝါရောင်အစွန်းအထင်းဆိုတာတွေ့ရဖို့လွယ်ကူသည်. သင်ဆေးလိပ်သောက်လျှင်ကြောင့်အဖြူအပြုံးစောင့်ရှောက်ဖို့မဟုတ်ဘဲခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်. သင်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ရှိသည်ဆိုပါက, သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်သင့်ရဲ့အံသွား၏အသွင်အပြင်ပြန်ဖြတ်သင့်တယ်.
အစွန်းအထင်းပွတ်သပ်နှင့်သင့်အံသွားလည်းဖြူစေသည့်လိမ္မော်ရောင်အခွံရဲ့အတွင်းဘက်ခြမ်းကိုသုံးပါ. သင်တို့သည်လည်းလိမ္မော်ရောင် peels နဲ့မြေပြင်ပင်လယ်အော်သင်တို့ရှိသမျှအပိုအသီးသကြားဖယ်ရှားပစ်ရန်နိန်ပြီးအောင်လာသောအခါသင်၏နှုတ်သုတ်ဖို့မွှေးကြိုင် toothpaste.Make သေချာစေရန်အရွက်အခြောက်လှန်းရောနှောနိုင်.
သူတို့အရောင်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆိုးဆေးများပါဝင်သောကဆက်ပြောသည် colors.Mouthwashes မလိုချင်တဲ့အရောင်ပြောင်းသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဆံ့အဖြစ်ကွာရောင်စုံ mouthwashes နေ.
သင့်ရဲ့အံသွားနိန်ဒဏ်ငွေအကာအကွယ်တိုင်းတာသည်. သင်တို့၌အစဉ်အချို့သွားတိုက်ဆေးအထူးသသင့်ရဲ့အံသွား Whiten စေရနိုင်. အမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသုတေသနပြုသင့်အံသွားဘို့အလုပ်လုပ်တယောက်ကိုကူညီရှာဖွေနိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦးလည်းဖြူပြုံးရရန်သင့်အသက်ရှုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါ. သင်၏လက်ကိုတစ်ဦးစင်ကြယ်သောအစိတ်အပိုင်းကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အားဖြင့်သင့်အသက်ရှုစမ်းသပ်ရန်. သင်တံတွေးအနံ့နိုင်လျှင်, တစ်ဦးပူစီနံဒါမှမဟုတ်တချို့ mouthwash ကိုသုံး. သငျသညျ mouthwash နှင့်အတူသွားလျှင်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခံတွင်းကိုခြောက်သွေ့ရှောင်ရှားရန်အရက်-အခမဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်.
အံသွား whitening အတော်လေးဆွေးနွေး sparks. ဒါဟာဒီဆောင်းပါးမှာဖတ်ရှုပြီးနောက်သင် whitening အံသွားဘို့တင်ပြစိတ်ကူးတွေအချို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချခံစားရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်. လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့သွားအရောင်တိုးတက်လာဖို့ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ.
categories: Whiten သွားဖို့အခြေခံပြီးမူလစာမျက်နှာ Tags:: အစွန်းအထင်းကိုစုပ်ယူ, သင့်ရဲ့အပြုံးတောက်ပစေတယ်, သွားဘက်ဆိုင်ရာသန့်ရှင်းရေး, လေဆာ whitening အံသွား, အံသွားစောင့်ရှောက်မှု, အဖြူအံသွား, အဖြူအံသွားအကြံပေးချက်များ, သင့်ရဲ့အံသွား Whiten, ဖြူပြုံး
သင့်ရဲ့အပြုံးအဲဒီအကြောင်းသိကောင်းစရာများနှင့်အတူ dazzle Make